आर्थिक – Page9– TajaNepal
EnglishMarch 19, 2019
काठमाडौँ । राजनीतिक दलका नेताहरुको दबाव, कार्यकर्ताहरुको माग, कर्मचारीको असहयोग जस्ता विषयबाट दिक्क बनेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाका लागि सो पद पनि घाँडो हुँदै जान थालेको छ । उनले यस्तै स्थिति रहे पद त्याग गर्ने…
आर्थिकMarch 19, 2019
काठमाडौँ । सिके राउतको पार्टी (स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन) को नाम परिवर्तन भएको छ । सिराहामा सोमबार सम्पन राष्ट्रिय परिषद बैठकले राउत नेतृत्वको पार्टीको नाम ‘जनमत पार्टी’ राख्ने निर्णय गरेको छ । लाहानमा सम्पन्न द’ई दिने…
टेलिकमको यो लुट कहिलेसम्म
काठमाडौं । भर्ती हुँदैमा सबैभन्दा कम नाफा कमाउने प्रतिस्पर्धीका रुपमा आएकी नेपाल टेलिकमकी प्रवन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारी आफू बेठीक नभए पनि लिएको टीम भ्रष्ट र नालायक हुँदा ग्राहक ठगेर पनि आफ्नो योजना पूरा गर्न नसक्ने…
भाषण भयो भूकम्प पीडितको उद्दार भएन
काठमाडौं÷देशमा दैवी विपत्ति आईपर्दा दाताले दिएको रकम समेत वितरण नगर्ने चरित्रका नेताको आफ्नो हैसियत देखाएको धेरै भएको छैन । २०७२ वैशाख १२ को महाप्रलय (भूकम्प) बाट ७ लाखभन्दा बढी घर भत्किए । ती मध्ये सरकारको…
सरकारले देखाउन थाल्यो काम
काठमाडौं । वामपन्थी प्रगतिशील देशभक्तहरुको नेतृत्वको सरकारले देश जनता र राष्ट्रको हितमा गर्ने कामको थालनी गरेको छ । भ्रष्टाचार कमिशन र आर्थिक अनियमितताको संरक्षण गरेको विगतको व्यूरोकेसीलाई शिक्षा दिँदै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रालयका सचिवहरु लाङ्गलिङ्ग…
यसरी थपिन्छ है राजस्व ?
काठमाडौं÷ आगामी नीति कार्यक्रमलाई भारत र चीनको प्रभाव नपरोस भन्ने जन चाहना छ । सिण्डिकेट तोड्ने वाहनामा भेदभाव गर्ने काम भयो भने जनहित गर्दैन । भारतीय चिनीया माफीया व्यापारीहरुले यातायात मात्र होइन उद्योग व्यापारको सिण्डिकेट…
प्रमको नजरमा नपुगेको वेथिती
अदालतले सक्दैन वीर अस्पतालको लुट रोक्न काठमाडौं । प्रधानमन्त्री भन्छन् भ्रष्टाचार रोकछु शुसान दिन्छु । तर चिकित्साविज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पतालभित्र भएको अनियमितताको छानवीनका लागि सरोकारवालाहरु छटपटाएका छन् । प्रधानमन्त्रीलाई थाहा छैन । अस्पतालमा करोडौ…
नेपाली कांग्रेसका नेताको नजरमा देशभर अधिनायकवाद लागू भएछ । पार्टी सत्तामा हुँदा न्यायलय सेना प्रहरी कही बाँकी नराख्ने नेपाली कांग्रेसले संसदीय कालको १४ वर्ष शासन गर्दा घुस लिदै कानुनी प्रकृया पूरा नगरे पनि स्वीकृत दिएका…
अर्थमा व्यापक फेरबदलको तयारी
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि पूर्व सरकारले खटाएको विभागका प्रमुखहरुको फेरबदल गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । अहिले डा. रामशरण महतको समयमा भन्सार विभाग, आन्तरिक राजश्व विभाग, राजश्व अनुसन्धान विभाग, ठूला…
घोषणापत्र, भाषण र सरकारको गति
आर्थिकApril 17, 2018
वाम कार्यदलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदैछ । प्रधानमन्त्रीका एक–दुई एकल निर्णयले धेरैलाई शङ्का उब्जायो । चलखेल गरेर कमाइ हुने ठाउँमा जान सिपालु सचिवहरूको फेरबदलमा चुइँक्क हुन पाएन । सचिवहरूले विगतमा पनि राम्रै चलखेल गर्थे…